Shiinaha oo soo saaray tagaasi bilaa darawal ah! | HalQaran.com
Home Warar Xiiso Leh Shiinaha oo soo saaray tagaasi bilaa darawal ah!
Shiinaha oo soo saaray tagaasi bilaa darawal ah!
Shirkadda Baidu ayaa soo saartay tagaasi bilaa darawal ah
China (Halqaran.com) – Shirkad tiknoolajiyadda ka shaqeyso oo laga leeyahay Shiinaha taasoo lagu magacaabo Baidu ayaa soo saartay tagaasi bilaa darawal ah, waxayna dhammaadka toddobaadkan usoo bandhigi doontaa dadweynaha.
Waxayna noqonaysaa markii ugu horreysay ee tagaasida nuucaan ah laga hirgaliyo waddanka Shiinaha.
Rakaabku waxay ku dalban karaan tagsigaan barnaamij la yiraahdo Apollo Go, markuu tagsigu yimaado rakaabku waa inuu caddeeyaa aqoonsigiisa kahor inta uusan fuulin, tagsigu wuxuu bilaabi doonaa inuu dhaqaaqo kaddib marka uu ogaado rakaabka inuu suumanka xirtay.
Baidu oo caan ku ah matoorada ayaa tijaabineysay tagsigaan ilaa iyo sanadkii hore, waxayna qaaday muddadaas in kabadan 210,000 oo rakaab ah oo kala jooga saddex magaalo oo katirsan Shiinaha, waxaana ujeedkeedu yahay inay kusii fidiso 30 magaalo saddexda sano ee soo socota, sida ay shirkaddu war-saxaafadeed ku sheegtay.
Tagaasi bilaa darawal ah